Garoowe: Tirada caruurta u jiifta isbitaalka cudurada faafa oo sii kordhaysa; ololihii todobaadka tallaalka oo guul ku soo dhamaaday. – Radio Daljir
Garoowe, April 30 – Waxaa sii kordhaya tirada carruurta ay soo ridanayaan cudurada kala duwan, kuwaas oo la seexiyey isbitaalka guud ee magaalada Garoowe. Sidaas waxaa maanta (Sabti) Daljir u sheegay Maxamed Xasan Carrabey oo ah madaxa qeybta carruurta ee isbitaalka Garoowe.
Dr. Carrabey oo aan ku booqanay Xafiiskiisa magaalada Garoowe, Ayaa sheegay in dhawrkii maalmood ee ugu dambeeyey ay isbitaalka ku geeriyoodeen ilaa laba iyo toban (12) carruur ah, kuwaas oo u dhintey cudurrada jadeecada, xiiqdheerta iyo maleeriyada isagoo intaas ku daray in ay weli isbitaalka jiifaan carruur aad u tiro badan.
Maxamed Xassan Carrabey ayaa mar aan weydiiney kororka ku yimid cudurrada carruurta iyo sababaha keeney, wuxuu sheegey in ay sabab u tahay tallaal la’aan heysata carruurta iyo waalidiinta oo aan intooda badan fahmin faa’iidada tallaalka.
Bukaannada jiifa isbitaalka guud ee magaalada Garoowe ayaa waxaa u badan carruur aad u yar yar, kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeysa ku sii badanaya isbitaalka. Sidoo kale kororka ku yimid cudurrada carruurta ayaa kusoo beegmaya xilli deegaannada Puntland maanta lagu soo gaba-gabeeyey todobaadka ololaha tallaalka, kaasoo ay iska kaashadeen wasaaradda caafimaadka Puntland iyo ha’adda caafimaadka adduunka xafiiskeeda Puntland.
Cabdi Xasan Rooble ‘Awoowe’
Halkan ka dhagayso warbixin ku saabsan ololihii tallaalka ee maanta (Sabti) soo gabagaboobay. Wariye Maxamed Cabdullaahi Kooshin ayaa soo diyaariyay.